Qorshaha baabi'inta hubka Suuriya - BBC Somali
Qorshaha baabi'inta hubka Suuriya
Image caption Kooxda baabi'inta hubka kiimikada Suuriya.
Hubka kiimikada ee dalka Suuriya dibadda ayaa loo qaadayaa si loogu burburiyo dalka dibadiisa, si loo xaqiijiyo in loo baabi'iyo sida ugu nabadgelyada badan uguna dhaqsaha badan. Hase yeeshee hadal ka soo baxay kooxda baabi'inta hubka kiimikada ah laguma sheegin goobta hubkaas lagu burburinayo.
Qorshahan waxaa loogu talagalay inuu noqdo tubta nabadda ee loo dejiyay dowladda Suuriya inay ka soo baxdo si nabadgelyo uga dhacdo dalka.
Waxay higsanayaan in la qaado dhammaan hubka kiimikada ah iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay ugu dambeyn shanta bisha Febraayo, iyadoo muhiimadda ugu weyni ay tahay sidii hubkaas dalka looga saari lahaa dhammaadka bisha December ee sanadkan.
Isku-duwaha gaarka ah ee guddiga wada jirka ah ee kooxda baabi'inta hubka kiimikada ah ee Qaramada Midoobay waxaa uu mahadnaq u jeediyay waddammada gacanta ka geystay maalgelinta iyo hiregelinta qorshahaasi ilaa iyo hadda, waxaana uu waddammada kale ku boorriyay inay ku soo biiraan dadaalka caalamiga ah.
Waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay in gebi ahaanba la baabi'iyo hubkaas kiimikada ah waxaa weeye bisha Juun ee sanadka dambe 2014.
Golaha fulinta ee kooxda baabi'inta hubka kiimikada ah ee dalka Suuriya ayaa doorteen in hubka khatarta ah dalkaas laga saaro dhammaadka sanadkan, waxaana la burburiyay 60% madaxyada hubka aan rakibneyn iyo bambooyin.